ဗီယက်နမ်အိုလံပစ်တိုက်ရိုက် 0-0 အိုလံပစ်ပါကစ္စတန်: Công Phượng đá chính
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲမတိုင်မီအင်ဒိုနီးရှား Hustle 2018
လွှဲပြောင်း 14/8: Eriksen đến PSG, MU “trói” De Gea
» အားကစား » ဘောလုံး » Bóng đá Việt Nam » Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường dự Asiad 2018
တနင်္လာနေ့, 13/08/2018 10:43
Sáng 13/8, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức lên đường dự Asiad 2018 tại Indonesia. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung hứng khởi về cơ hội làm nên kỳ tích ở sân chơi Á vận hội.
အချိန်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်: 15:03 14/08/2018. ယူနစ်စျေးနှုန်း: (ထောင်ပေါင်းများစွာသော / အသံအတိုးအကျယ်)
HCM လက်လီ DOJI 36,600 36,720
Doji HCM လူကုန်ကူးမှု 36,610 36,700
Doji လက်လီအရှေ့တောင် 36,590 36,730
Doji အရှေ့တောင်လူကုန်ကူးမှု 36,600 36,710
ကုန်ကြမ်း 9999 - HN 34,150 34,250
ကုန်ကြမ်း 999 - HN 34,100 34,200
Doji HP ကလက်လီ 36,610 36,700
HP ကလူကုန်ကူးမှု Doji 36,620 36,690
လေတိုက် TTB9km / h
Nghi vấn vỡ hụi hàng chục tỷ đồng, ပိတ် 200 người làm đơn trình báo
မိသားစု3người bị giết ở Tiền Giang mất nhiều tài sản
ကျောင်းအပ်အတန်း 1 ကျော်ရန် 60 ကျောင်းသားများကို / လူတန်းစား, ပညာရေးဦးစီးဌာန- ဟနွိုင်းလျစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကို
interactive သင်္ချာ: ထိုပြဿနာကိုခွဲထားခဲ့သည် sequence ကိုဖွကွေား
ဟနွိုင်းအဆိုပြုချက်ကို3လူတန်းစားကျောင်းအပ်အစီအစဉ် 10 ခုနှစ် 2019
တက္ကသိုလ်ယဉ်ကျေးမှု, အားကစားနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Thanh က Hoa တွင်အပိုဆောင်းဝန်ခံချက်တစ်နှစ် 2018
120.000 မူကြိုဆရာ, ဆရာမခဲတညျးရှာအားလပ်ရက် mode ကိုအလုပ်မလုပ်
ဆပ်ဖို့မွို့၌တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ 152 သန်း / ဆရာဝန်များအတွက်လ
နံကင်မွှေးသောရွေ့လျားဆော့ဝဲ marinated, အရသာအားလုံးအရှုံး
ယောက်ျားလေးကပိုပျားပိတုန်းကိုမီးရှို့ 100 မှတ်စု
သင်တည်နေရာကို turn off လျှင်ပင်ဖြစ်ကြသည်ရှိရာက Google နေဆဲသိတယ်
Apple ကထိပ်ဆုံးရရှိထားသူ, Samsung ကဖုန်းစျေးနှုန်းကိုအဆင့်နှိမ့
ထရီလီယံဒေါ်လာကုမ္ပဏီသို့ကြွလာလျက်အမေဇုံ Apple ကခြေရာ
Lamborghini က Countach ပြီးနောက်အဟောင်းဂိုဒေါင်၌တွေ့ 20 စွန့်ပစ်အတွက်